नायक निखिलले निकै दुख दियो : निर्माता कपिल खत्री - Janakpur Today
नायक निखिलले निकै दुख दियो : निर्माता कपिल खत्री
बिगत ११बर्ष देखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय कलाकार तथा निर्माता कपिल खत्री भर्खरै आफ्नो होम प्रोडक्सन द ग्लोबल पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण गरेका चलचित्र भिलेन केही समय अघिनै अल नेपाल रिलिज गरिएको थियो । सो चलचित्र निर्माण देखि सिनेमा घर सम्म ल्याउन दिनरात मेहनत गरेका कपिल खत्री सङ जनकपुर टुडे रौतहटका प्रतिनिधि दिपु मिश्र सङ्गको कुराकानी संक्षिप्त्तमा !
१) भर्खरै चलचित्र भिलेन प्रदर्शन गर्नुभयो आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– चलचित्र भिलेन प्रदर्शन पछि अहिले नयाँ चलचित्रको तयारीमा छु । साथै राजधानीमा आफ्नै रेस्टुरेन्टमा दिनचर्या बित्दै छ ।
२) चलचित्र प्रदर्शन पछि अबको दिनमा चलचित्र क्षेत्रमै जोड दिनु हुन्छ कि आफ्नै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
-यस क्षेत्रमा लागेर करिब एघार बर्ष भयो लागीसक्यो यो क्षेत्रमा धेरै मेहनत गरियो र आज एक निर्माता एबम कलाकारको रुपमा उभिएको छु । चलचित्र क्षेत्र त छोड्नै मिलेन र अर्को कुरा रेस्टुरेन्टले पनि राम्रै व्यापार गर्दै आएकोले अहिले लाई यो दुइटै छोड्दिन ।
३) हजुरले निर्माण तथा अभिनय गरेको चलचित्र भिलेनले कस्तो प्रतिक्रिया पायो त ?
– मैले निर्माण तथा अभिनय गरेको चलचित्र भिलेन राम्रो बनेको थियो । नेपालभरी जति दर्शकले हेर्नुभयो राम्रो प्रतिक्रिया दिनु भयो । साथै दर्सकहरुले मेरो अभिनयलाई पनि मन पराइदिनु भएकोले पछिल्लो दिनहरुको लागि पनि हौसला मिलेको छ मलाई ।
४) चलचित्र भिलेनमा नायक निखिल उप्रेतीले निकै दुख दिनुभयो भन्ने हल्ला थियो नि ?
– हो जब चलचित्र भिलेनमा काम गर्ने सम्झौता भयो , उनलाई तोकिएको पारिश्रमिक पनि अग्रिम दिइयो तेस पश्चात् उहा सम्पर्क बिहिन हुनुभयो । चलचित्रको छयाङकनको समयमा नायक उप्रेतीलाई खोज्दै बुटवल , नारायणघाट, चितवन लगाएतमा ठाउहरुमा हिड्नु पर्यो । दुख धेरै दिनुभयो ।
५) तपाईको चलचित्र भिलेन मल्टीप्लेक्स हलमा नलाग्नुको कारण के थियो होला ?
– चलचित्र भिलेन देशको करिब ९० वटा सिनेमाहलहरुमा प्रदर्शन भएको थियो । उपत्यका भित्रका मल्टीप्लेक्सहरुले चलचित्रमा निखिल उप्रेती भएकोले नचल्ने भन्दै चलचित्र लगाएन्न । खै किन हो!
६) हजुर त कलाकार तथा निर्माता दुबै हुनुहुन्छ । यो भन्दा पहिला कुनै चलचित्रमा काम गर्नुभएको थियो ?
– आज भन्दा ७ वर्ष पहिला आफ्नै निर्माण तथा अभिनयमा चलचित्र वन साइड लभ गरेको थिए । सो चलचित्र पश्चात भिलेन निर्माण गरेको हो ।
७) अब चलचित्र निर्माण गर्नु हुन्छ कि अभिनय मात्र ?
– केही समय पछि पुन:आफ्नै ब्यानरमा काम गर्ने तयारीमा छु । साथै छिट्टै भोजपुरी निर्माता अभिनब पाण्डेको भोजपुरि चलचित्रमा अभिनय गर्दैछु । अबको केही समयमै चलचित्र छयाङकनको लागि भारतको बनारस जाने तयारीमा छु ।
८) भनेपछि अब भोजपुरी चलचित्र तिर जोडिदै हुनुहुन्छ, के अब नेपाली सिनेमा छोड्ने बिचार गर्नु भएको हो ?
– हैन, हिजो मात्रै भारतको मुम्बईबाट नेपाल आउनुभएको भोजपुरि चलचित्र निर्माता अभिनब पाण्डे सङ कुराभएको थियो। मलाई पनि भोजपुरि चलचित्र तिर काम गर्ने रहर थियो । उहाँ पनि नेपाली कलाकार लाई आफ्नो चलचित्रमा काम गराउने उदेश्यले आउनुभएकोले तसर्थ हामी बिच एक सहमति भएको हो । तर आगामी दिनहरुमा म नेपाली चलचित्रलाई निरन्तरता दिनेछु ।
९) अन्तिममा आफ्नो दर्शकहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
– म नेपाली चलचित्रमा आजिवन काम गर्नेछु दर्शकहरुले माया गरिदिनु होला, नेपाली चलचित्र हेरिदिनुहोला धन्यवाद…… जय सिनेमा…..
कहिल्यै हार नमार्न विद्यार्थीलाई निखिलको आग्रह
जनकपुरमा अन्तराष्ट्रिय योग शिविर सुरु